Antsirabe : Solosaina an-jatony very : mpiasa iray naiditra am-ponja – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → novembre → 16 → Antsirabe : Solosaina an-jatony very : mpiasa iray naiditra am-ponja
Efa ho herintaona aty aoriana vao nipoitra indray ilay raharaha fahaverezana solosaina an-jatony maro tao amin’ny kaominina ambonivohitra Antsirabe, ny marimarina kokoa tao amin’ny sampandraharahan’ny « voirie ». Raha tsiahivina, talohan’ny volana oktobra 2014 no nahaverezan’ireo solosaina ireo, saingy ny volana janoary 2015 vao nampahafantarina. Nisy mpiambina iray nilaza fa nahita maso ny namoahana ireo solosaina maro be ireo, ary notambazana vola izy tsy hilaza ny zavatra hitany. Efa nisy ihany ny fanadihadiana nisokatra tamin’ny fitantanan’ny Pds Beryl Razafindrainony saingy tsy nahitam-bokany izany ary niakatra hatrany amin’ny fitsarana. Nifampitory tany amin’ny fitsarana ny mpitantana sasany nandritra io fitantanana io ka isan’ny notoriana tamin’izany ny injeniera iray miaraka amin’ny filohan’ny Filankevitry ny tanàna . Taorian’ny fitsarana, afaka noho ny fisalasalana ny injeniera ary nampiatoina ny fanenjehana ny filohan’ny Filankevitra. Ilay mpiambina nilaza fa notambazana 60.000 ariary kosa ho vidin’ny fahanginany dia naiditra am-ponja.
Mpisandoka ho mpisolovava voasambotra
Ela nitoratorahana ity rangahy iray ka voasambotra ihany ny farany. Hafa ny azy ny fitadiavany fa dia sahy misandoka ho mpisolovava izao ranamana ary maka vola be amina olona. Raha ny fahitana azy ety ivelany aloha dia toy ireny mpisolovava ireny mihitsy ny endrika ivelany miaraka amina valizy kely iray sy antotan-taratasy maro, ary fitomboka.
Milaza ity rangahy ity fa afaka mampiditra olona ho lasa vadintany na mpitsara. Angalany hatrany amin’ny 30 tapitrisa ny mpiadina iray. Olona dimy no fantatra hatreto fa efa tratrany. Marihina fa mitondra basy ihany koa ity mpisandoka ity saingy basy kilalao no entiny hampitahorana olona any ambanivohitra. Manana ireny fitoerana basy poleta vita hoditra ireny izy, raha jerena tampoka dia toa tena basy tena izy no fahitana azy. Ao amin’ny distrikan’i Mandoto sy Mandaniresaka Antsirabe no tena anaovany ity asa ratsiny famitaham-bahoaka ity.